Qaybo caag ah oo loo yaqaan CNC warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Ouzhan
Mashiinka balaastigga ah waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo ku habboon mashiinka, nylon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP) ). Markaad xulaneyso qalabka loogu talagalay sawirada naqshadeynta, balaastikada injineernimada ku habboon waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo bay'ada isticmaalka iyo shuruudaha u dhigma ee qaybaha mashiinnada CNC
Caaga CNC Milling-qiray Qalabka Milling Qaybo Machining
Faa'iidooyinka Ouzhan Qaybo ka Mid ah Balaastiig Caag ah
- Caaggu wuxuu leeyahay cufnaan hoose iyo miisaan fudud.
- Awood gaar ah oo gaar ah iyo qallafsanaan gaar ah.
- Xasiloonida kiimikada wanaagsan.
- Kuleylka korantada oo wanaagsan.
- Yaraynta khilaafaadka wanaagsan, iska caabinta khilaafaadka iyo is saliidaynta.
- Waxqabadka wanaagsan iyo midabaynta midabaynta.
- Noocyo kala duwan oo ah ilaalinta jirka iyo kiimikada.
- Ma sahlana in la wareejiyo kuleylka oo wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo ilaalin kuleylka ah.
- Qiimaha wax soo saarka oo hooseeya.
OEM qalabaynta axdi qarameedka caag-Shiinaha Shanghai CNC qaybo axdi qarameedka caag ah
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamilka, qaybaha balaastigga ah ee sifeeya CNC oo tayo sare leh oo tayo leh oo la isku halleyn karo ayaa laga baaraandegi karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka axdi qarameedka. Intaa waxaa dheer, alaabada caag ah ee la shiiday ee CNC ayaa si adag loo daboolay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Waxaanan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan leh alaabada wax lagu shiido ee caaga ah macaamiishayada qiimaha leh.
Noocyada qaybaha Ouzhan ee wax lagu shiido caaga
Qalabka loo isticmaalo shaqooyinka saxda ah ee laga soo saaro warshadaha mashiinka mashiinka CNC ayaa loo qaybiyaa laba qaybood: biraha iyo caagagga injineernimada. Biraha waxaa ka mid ah aluminium aluminium, bir, naxaas, aalado kala duwan oo adag, iwm. Qalabka caadiga ah ee ku shaqeeya dhirta mashiinka mashiinka CNC waa caag injineernimo ah oo aan ka ahayn qalabka birta, iyo qalabka caagagga ah waxay leeyihiin aalado dahaaran oo bir ah
Faa'iidooyinka Adeegga Millinka Caaga ah ee Ouzhan
- Dhammaan waxsoosaarka saxda ah ee CNC ee caagagga milled ah waxay ku xiran yihiin baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si sax ah wax u shiidaya qaybo caag ah.
Hore: Axdi qarameedka steel warshad steel machining
Xiga: Qaybaha leexinta CNC